Zavatra tsy mpitety miasa fotsiny natao tsara noho ny olon-kafa: Izany dia haingana ary milamina kokoa.
Firefox (jereo koa eto ambany momba addons) – 10/10
Firefox, na dia tsy ho toy ny Google Chrome populare, Mbola Mpanjakan'ny customization. Izany dia akaiky faharoa ho ahy.
Mampiasa KeePass aho mba hitandrina ny tenimiafina voavonjy, misy mari-pamantarana, notehirizina ivelan'ny faha-3-antoko fanaraha-maso.
Tena ilaina fanoloana for Dropbox. Izany freemium – though I don’t have a pressing need to use the Pro Edition, raha manao izany aho dia tsy misalasala mba handoavana ny azy.
Aiza koa no manana ny fitehirizam-boky ny lalao?
Izany dia Windows Fitaovana Manampy serialise dika mitovy / hetsika asa. Nifindra eo izany rehefa TeraCopy nanana olana mifanaraka amin'ny 64bit. It only loses points for having a cluttered UX
Zavatra tsy madio sy ny zara Adaona milaza anareo, raha ny SSL taratasy ho amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ianao dia mijery ela dia handeha hiala aina. Raha ny toerana manana taratasy fanamarinana SSL, Manoro hevitra anareo aho hampiasa Adaona ity mba hanampy ny vohikala tsy ny SSL expiring taratasy tsotra noho ny tsy fahampian'ny fampahafantarana na miscommunication.
Fa tranonkala fampandrosoana sy ny fanandramana amin'ny pejy. Mahatahotra ho an'ny mizaha toetra potika kely ny fehezan-dalàna ary koa ny debugging pejy.
Mahatahotra ho variana pejy manokana amin'ny alalan'ny taratasy fanomezam-pahefana manokana lohamilina. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for in a Transparent Proxy server. 🙂
I mampiasa izany ny lalana sasany fifamoivoizana ny taratasy fanomezam-pahefana lohamilina izay aho fa tsy handeha amin'ny alalan'ny toerana misy anao lalana. Izany ihany koa tena malefaka. Raha manana mihoatra ny iray misy mpizara taratasy fanomezam-pahefana sy ny olona mampiasa matetika tampoka ianao mandeha amin'ny 'ny indray mipi, mifamadika fotsiny eo ny manaraka. 🙂
Greasemonkey manampy manovaova. There are many available scripts online to customise pages.
Noscript mahatahotra amin'ny fanakanana dokam-barotra. Ny mahasosotra kely tamin'ny voalohany, satria tsy maintsy whitelist rehetra ny toerana tianao – fa any aoriana any dia tena very maina izany. 🙂
hanangana Pages – 10/10
Tena mahasoa Fa raha mijery ny toerana dia tonga izany mba ho any. Raha toa ka ny toerana dia voasakantsakan'ny-afa-po-mirona dia izany no mahatonga azy mora ny haingana mahita ny afa-po raha ny Voatakona-tserasera.
Screengrab dia tsotra pikantsary Adaona, izay atleta Pikantsary avy amin'ny tranonkala manontolo pejy ianao mijery, na dia lehibe kokoa noho ny haben'ny efijery. Ny ankamaroany mampiasa izany aho ka tsy manana ny vokatra ny pikantsary taty aoriana.
Misy ny helo amin'ny vodi tsy misy plugin io raha te-hamantatra ny lohamilina. Nahazatra ahy ny tsy maintsy manao izany ny fotoana rehetra.
Mahatahotra vakizoro fitantanana fa raha mahery 7-na-ka levitra.
Video DownloadHelper mitady mivantana haino aman-jery – manokana misy mitady afa-po lehibe izay ho alaina. Rehefa tsindrio eo amin'ny matoanteny, izany dia mampiseho anao ny amin'izao fotoana izao-misintona renirano sy manome anao ny safidy mba milahatra azy io ho toy ny “ara-dalàna” Download.
Koa satria tsy fantatrao ianao raha FF no handeha hianjera na ny fahefana dia handeha manapaka, Kokoa aho mba hamonjy ny dika mitovy ny ny biraonao, ary afaka mijery ny lahatsary avy eo nefa tsy mampiasa bebe kokoa passante mba télécharger ny lahatsary indray. koa, any am-piasana, rehefa handefa ahy rohy amin'ny YouTube na haino aman-jery hafa, Matetika aho no tsy manahirana mijery mandra-be rehefa – eo amin'ny ny fialam-boly, na nandritra ny fiatoana.